Rest of Myanmar | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း မှ | MyJobs
Rest of Myanmar ရှိ နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း မှ
Sales Representative(Bago Region)
အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ 1 လ
Accountant - Female (1 Post) (Myitkyinar Branch)
စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 1 လ
Responsibility of delivering training for Myankhon/Myotaw,adigital tax collection project at Shan state.
Responsibility of delivering training for Myankhon/Myotaw,adigital tax collection project at S ...
Territory Sales Manager(Shan State)
The overall objective of this role is to increase transactions/revenues, active customers, active agents & active merchants throughamotivated sales.
The overall objective of this role is to increase transactions/revenues, active customers, activ ...
Branch Manager (Amara Distribution Services Co.,Ltd) (Branch - Myeik)
Field Maintenance Supervisor (Outside Plant)
Field Maintenance Supervisor (Outside Plant) ဝန်ထမ်းနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း - Only for Male - အမျိုးသားများသာလျောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။
Field Maintenance Supervisor (Outside Plant) ဝန်ထမ်းနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း - Only ...
Team Leader (Amara Distribution Services Co., Ltd.) (Branches - Shwe Bo, Tabayin, Kawlin)
Sales Executive (Amara Distribution Services Co.,Ltd) (Braches - Shwe Bo, Kathar, Kawlin)
- Customer Relationship - Supervisory Management
နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။